မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ အင်အားအကြီးမားဆုံး စစ်လက်နက်များအကြောင်း - hotnewmyanmar.com
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ အင်အားအကြီးမားဆုံး စစ်လက်နက်များအကြောင်း
ဒီပို့စ်လေးမှာတော့ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ လက်နက်တိုက်ထဲမှာ ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ အင်အားအပြင်းဆုံးလက်နက်များအကြောင်းကို ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ စစ်တပ်ဟာဆိုရင်ဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စစ်တပ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်သလို နျူကလီးယား လက်နက်များ ဝယ်ယူမှုတွေကြောင့် လက်နက်အင်အား အခြေအနေဟာလည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာကာ
ယခုအခါ မြောက်ကိုရီးယားဟာ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံတွင်းကိစ္စရပ်များမှာ အခြားနိုင်ငံများကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မပြုရန်အတွက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
1. Pokpung-ho3Main Battle Tank (MBT)
အလေးချိန် ၄၄ တန်ရှိတဲ့ အပေါ့စားတင့်ကားမျိုးဖြစ်ပြီး ဒီတင့်ကားရဲ့ လက်ရှိဗားရှင်းမှာ လက်နက်ကိရိယာများ အစံအလင် တပ်ဆင်ထားကာ အဲ့ဒီထဲမှာတော့ တာတိုပစ်နဲ့ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည်နှစ်စင်းစီနဲ့ တင့်ကားပစ် ဒုံးကျည်နှစ်စင်းတို့ကို တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှစ်လုံးပြူး ၁၄.၅ မီလီမီတာ စက်သေနတ်လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
2. Hwasong-14 Intercontinental Ballistic Missile (ICBM)
ဒီစစ်လက်နက်ကိုတော့ မြောက်ကိုရီးယားဟာ ရုရှားနဲ့ တရုတ်တို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ တီထွင်ထားခဲ့တဲ့ တိုက်ချင်းပစ် ဒုံးကျည်သစ်ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ပထမဆုံး ICBM အမျိုးအစား ဒုံးကျည်ဖြစ်ကာ အလေးချိန်ပေါ်မူတည်၍ ဒုံးကျည်ဟာ ကီလိုမီတာ တစ်သောင်းလေးရာအထိ ရောက်ရှိနိုင်တာကြောင့် ဒီဒုံးကျည်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိစေမှာပါ။ ဒီဒုံးကျည်ဟာ Nango-အတန်းအစား ဒုံးကျည်တစ်စင်းကို သယ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။
3. Nongo class Missile Boat
မြောက်ကိုရီးယားရေတပ်ဟာ ရေပြင်က တိုက်ပွဲတွေကို အသာစီးရယူဖို့အတွက် ဒီဒုံးကျည်လှေကို အဓိက အားကိုးနေရပါတယ်။ ဒီဒုံးကျည်လှေတွေမှာ အစွမ်းထက်သော ဒုံးကျည်လက်နက်ပါရှိသလို ကိုယ်ထည်သေးငယ်ပြီး မြန်နှုန်းမြင့် ဒုံးကျည်လှေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလှေများဟာ တစ်နာရီကို ၉၂ ကီလိုမီတာ အမြန်နှုန်းအထိ ပြေးဆွဲနိုင်တာကြောင့် ခြေရာခံရန် အလွန်ခက်ခဲလှသလို လက်ရှိ မြောက်ကိုရီးယားမှာတော့ ၆ စင်းသူ ပိုင်ဆိုင်သေးပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ ဒီထက် ပိုမိုများပြားစွာ ပိုင်ဆိုင်လာရင်တော့ ရေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာ မြောက်ကိုရီးယားကို အသာရဖို့ ပိုမိုခက်ခဲသွားမှာပါ။
4. Sinpo Class Submarine
Sinpo Class ဟာ မြောက်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ နျူကလီးယားထိပ်ဖူးတပ် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ကို ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ ပထမဆုံး ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် ရေငုပ်သင်္ဘော ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်္ဘောဟာ ရေမြုပ်ချိန်မှာလည်း တန်ချိန် ၁၆၀၀ ခန့်သာ အလေးချိန်ရှိတာကြောင့် ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး ရေငုပ်သင်္ဘောအမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ စမ်းသပ်ကာလသာ ရှိသေးပေမဲ့ ဒီရေငုပ်သင်္ဘောရဲ့ နျူကလီးယားထိပ်ဖူး ဒုံးကျည်ဟာ ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ကနေ ၂၅၀၀ အတွင်း ပစ်ခတ်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပြီး သင်္ဘောရှိ စက်ယန္တရားများနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံးကို ပိတ်လိုက်ရင်လည်း ရေအောက်ဘက်မှာ နေနေနိုင်တဲ့ ဒီဇယ်လျှပ်စစ် ရေငုပ်သင်္ဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားဟာ ဒီရေငုပ်သင်္ဘောနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို အထူးလျှို့ဝှက် ထိန်းသိမ်းထားတာကြောင့် အခြားစစ်တပ်တွေအတွက်တော့ ခေါင်းကိုက်စရာ စစ်လက်နက်တစ်ခုပါပဲ။
5. Koksan Self Propelled Gun
အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများမရှိတာကြောင့် ၎င်းတို့ကို ပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီး အအပြင်းထန်ဆုံး တိုက်ပွဲများတွင်ပင် လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
အမြောက်တစ်ခုစီဟာ ၁၇၀ မီလီမီတာ လေးလံသလို အမြောက်သေနတ်တွင် အဖွင့်ပုံစံနဲ့ ပိုရှည်သော ကိုယ်ထည်ပါရှိတာကြောင့် ကျည် ၁၂ တောင့်လောက်ကို ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။
အမြင့်ဆုံး အကွာအဝေး ၆၀ ကီလိုမီတာထိ ပစ်ခတ်နိုင်ပြီး ၅ မိနစ်ကို အကြမ်းဖျင်း ၂ ကြိမ် အနှေးပစ်ခတ်နှုန်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် ဒီလက်နက်ဟာ အလွန့်အလွန်ကြီးမားတဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။
Knight News Teams
Previous Article ဧရိယာ ၅၁ က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ယာဉ်များ
Next Article မီးတောင်၏အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ကမ္ဘာ့မီးတောင်အမျိုးအစားများ